Ungavumelanisa kanjani kalula amakhalenda we-iCloud neGoogle | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | | iCloud, Okokufundisa namanyuwali
Ngaphandle kokuthi iningi lethu linawo wonke amadivayisi wethu ngaphakathi kwe-Apple ecosystem, ukuba khona kweGoogle yonke indawo kuzo zonke izinsizakalo ze-intanethi kusho ukuthi ezikhathini eziningi kufanele usebenzise eyodwa yazo. Omunye wemibuzo ebuzwa njalo ukuthi ungavumelanisa kanjani amakhalenda we-iCloud ne-Google Khalenda ngokuzenzekelayo, futhi yilokho esizokuchazela khona namuhla.
Kuyindlela elula kakhulu ezikhathini eziningi, ngokwesibonelo uma sine-Android smartphone noma ithebhulethi, noma uma emsebenzini "siphoqelelwa" ukusebenzisa i-Google Khalenda. Akunasidingo sokuchitha amahora noma imali ubheka izinhlelo ezisivumela ukuthi senze lo msebenzi, ngoba izinsizakalo zomdabu uqobo zisivumela ukuthi sikwenze ngokuzenzakalela futhi mahhala, futhi yilokho esikuchazela kona ngezansi ngemininingwane ebanzi.
1 Imininingwane emibili ebalulekile okufanele uyikhumbule
2 1. Yabelana kusuka ku-iCloud
3 2. Ngenisa ku-Google Khalenda
Imininingwane emibili ebalulekile okufanele uyikhumbule
Ukuze sivumelanise la makhalenda kufanele samukele ukuphazamiseka okumbili. Owokuqala yilokho kuzofanele sabelane esidlangalaleni ngekhalenda le-iCloud sifuna ukuvumelanisa, okungaba inkinga enkulu ezimweni ezithile (hhayi eyami). Lokho kusho ukuthi noma ngubani onaleso sixhumanisi esikhiqiziwe angafinyelela kukhalenda, kepha isixhumanisi akulula ukusithola.
Inkinga yesibili ukuthi ukuvumelanisa kuyindlela eyodwa kuphela, kusuka ku-ICloud kuya kuGoogle, okungukuthi, kusuka ku-Google Khalenda awukwazi ukuguqula noma yini kulawo makhalenda. Ngaphezu kokuphazamiseka, kimi kuyinzuzo, kepha uma udinga lokhu ukuthi kungabi njalo, le ndlela esikunikeza yona lapha ayisebenzi kuwe.
1. Yabelana kusuka ku-iCloud
Isinyathelo sokuqala ukwaba ikhalenda kusuka ku-akhawunti yakho ye-iCloud. Okwakho kusuka kusiphequluli sekhompiyutha sifinyelela ICloud.com futhi ngaphakathi kwenketho yekhalenda sichofoza kusithonjana samaza amane (njengesithonjana se-WiFi) ukuletha izinketho zokwabelana. Kufanele sisebenzise inketho yeKhalenda Yomphakathi, bese sikopisha isixhumanisi esivela ngaphansi kwaso.
2. Ngenisa ku-Google Khalenda
Manje kufanele singene ku-Google Khalenda kusuka kusiphequluli sekhompyutha, futhi ngaphakathi kwesikrini esikhulu engeza ikhalenda evela ku-URL, njengoba kukhonjisiwe ku-skrini.
Ngaphakathi kwenkambu ehambelanayo sinamathisela ikheli le-URL ebesikopisha phambilini, kepha kukhona okumele kwenziwe ngaphambi kokulifaka ku-Google. Kumele siguqule ingxenye yokuqala yekhalenda le "webcal" libe "http" njengoba kubonakala ku-skrini. Uma lokhu sekwenziwe, singachofoza ku- "Faka Ikhalenda" ukuze ivele ku-Google Khalenda.
Lokhu kusebenza singayiphinda kaningi njengoba sidinga ngamakhalenda e-iCloud amaningi. Ngaphakathi kokukhethwa kwekhalenda ngalinye ku-Google Khalenda singashintsha igama, umbala, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungavumelanisa kanjani amakhalenda we-iCloud neGoogle kalula
Sawubona, ngilandele izinyathelo futhi kunguqulo ye-PC yekhalenda izinguquko engizenzayo kuselula azibuyekezwa. Uma kuliqiniso ukuthi ekuqaleni ingilethela izehlakalo zeselula, kepha uma sekwenziwe ikhalenda, i-update iphone => pc ayihambi, kepha uma kungenjalo, okuyi-PC eya kuselula (impela ngokushesha)
Yini engahle yehluleke ???
Sawubona Luis, ngiyabonga ngokuthunyelwe. Lapho sengivumelanise ikhalenda ye-iCloud eyabiwe kwikhompyutha yami, angikwazi ukuqhubeka ngibona izibuyekezo zalelo khalenda. Kunjengokungathi imicimbi ivumelaniswe kuze kube yileso sikhathi bese kungekho okunye ukuvumelanisa. Noma yikuphi ukusikisela?
Hhayi, angazi ... hlola izinyathelo ngoba ziyangivuselela
Ngifana noAndres, futhi ngikwenze izikhathi eziyinkulungwane. Engikufaka ku-iPhone, akusabonakali kwikhalenda le-google
Kwenzeka ngokufana ncamashi.
Ngibonga kakhulu!!! ngemuva kokusesha okuningi ngezeluleko zakho ngikwenze ngomzuzwana .... imikhonzo
Ngikwenze lokhu kaningana futhi imicimbi engiyidalayo ekhalendeni le-iCloud ayiveli kukhalenda yeGoogle. Kungenzeka yini okuthile kushintshile?
Kwenzeka kimi ngokufana ncamashi. Ngiyazenza lezi zinyathelo (ngizamile ngama-mobiles ahlukile) futhi izehlakalo ezenziwe kuze kube yileso sikhathi ziyavela kepha ezintsha azisaveli, futhi azingixwayisi, futhi azivumelanisiwe futhi. Kusengathi imininingwane esivele ikhona kepha lena entsha ayiyibuyekezi. Ngabe kukhona owaziyo enye indlela? Ngiyenqaba ukuthi ngithenge i-iPhone yalombhedo wekhalenda, wow. Kepha ngiyayidinga ngezinkinga zabasebenzi !!
Inigo Iturmendi kusho
Yeka ukusebenza kahle! Ngiyabonga, Luis.
Phendula ku-Íñigo Iturmendi
URicardo Galache kusho
Kuhle. Angilutholanga ulwazi kunoma yisiphi esinye isixhumanisi.
Phendula uRicardo Galache
Okuthunyelwe okuhle kakhulu. Ngibonga kakhulu ngokunikela kwakho.
UDaniel Duarte kusho
Ngiyabonga! Isebenziseka, icacile futhi icacile.
Phendula uDaniel Duarte
Sawubona, ngivumelanise amakhalenda, kepha uma ngifaka isikhumbuzi esisha kukhalenda ye-iCloud, ayibuyekezwa kukhalenda ye-gmal.
Ngenze ukuvumelanisa ukuze ku-Google Calendar kubonakale izehlakalo zekhalenda le-Apple. Ngabe zizovumelaniswa ngokuzenzakalela ngokuzayo noma kufanele ngikwenze njalo lapho umcimbi omusha wenziwa ekhalendeni le-google?
Abanye Oxhumana Nabo (TOC), okuhlukile ku-ajenda yakho ngemfihlo ephelele
I-Tile Sport, ukuhlaziywa kwale tracker emelana nenhle kakhulu